မန်စီးတီး-ဟတ်ဒါဖီးလ်ပွဲမှာ ပရိသတ်တွေ သတိမထားမိခဲ့တဲ့ ထူးခြားချက်များ
20 Aug 2018 . 11:43 AM
ဂွါဒီယိုလာ Guardiola ရဲ့ မန်စီးတီးအသင်းကတော့ လက်ရှိချန်ပီယံခြေစွမ်း ဆက်ထိန်းခဲ့ပြီး ဟတ်ဒါဖီးလ်ကို (၆-၁)ဂိုးနဲ့ အပြတ်အသတ် ချေမှုန်းပစ်ခဲ့တယ်။ အဂွဲရိုး Aguero ရဲ့ ဟက်ထရစ်နဲ့အတူ ဒေးဗစ်ဆေးလ်ဗား David Silva ၊ ဂျေးဆူ Jesus တို့ကလည်း တစ်တပ်တအား ပါဝင်ခဲ့ပြီး နောက်တစ်ဂိုးကတော့ ဟတ်ဒါဖီးလ်က ကွန်ဂိုလို Kongolo ကိုယ့်ဂိုးကိုယ် သွင်းယူခဲ့တာပါ။ အဲဒီပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပရိသတ်တွေ မသိလိုက်တဲ့ ထူးခြားချက်တွေကို နာမည်ကြီးဗြိတိန်သတင်းစာ Daily Mail က အခုလို ဖော်ပြခဲ့တယ် . . .
မန်စီးတီး အသင်းသမိုင်းတစ်လျှောက် ပထမဆုံး Assists ပိုင်ရှင် ဂိုးသမား အီဒါဆန် Ederson
မန်စီးတီးအသင်းရဲ့ ဘရာဇီးလ်ဂိုးသမား အီဒါဆန် Ederson ကတော့ အသင်းသမိုင်းတစ်လျှောက် ဂိုးဖန်တီးမှု (Assists)ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးဂိုးသမားအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တယ်။ (၂၅)မိနစ်မှာ အဂွဲရိုး သွင်းယူခဲ့တဲ့ အဖွင့်ဂိုးက အီဒါဆင် ကန်တင်ပေးလိုက်တဲ့ ဘောလုံးကနေတစ်ဆင့် သွင်းယူခဲ့တာပါ။
ပွဲကြည့်ပရိသတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဒီဘရိုင်းနား De Bruyne
မန်စီးတီးအသင်းရဲ့ အောင်ပွဲကို ပွဲကြည့်ပရိသတ်တစ်ဦးအဖြစ်သာ ကြည့်ခွင့်ရခဲ့တဲ့သူ တစ်ဦးရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ လေ့ကျင့်ရေးကွင်းမှာ ဒူးဒဏ်ရာရခဲ့လို့ (၃)လအထိ အနားယူရမယ့် ကွင်းလယ်လူ ဒီဘရိုင်းနား De Bruyne ပါပဲ။ ဒီဘရိုင်းနားနဲ့အတူ ပွဲကြည့်ပရိသတ်ဖြစ်ခဲ့တာကတော့ နောက်ထပ်ကွင်းလယ်လူ ဖေဘီယန်ဒဲ့လ်ဖ် Fabian Delph ဖြစ်ပြီး သူလည်း ဒဏ်ရာကြောင့် ဟတ်ဒါဖီးလ်နဲ့ပွဲမှာ ပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။
Hat-trick hero အဂွဲရိုး
မန်စီးတီးအသင်း သမိုင်းတစ်လျှောက် သွင်းဂိုးအများဆုံး တိုက်စစ်မှူး အဂွဲရိုးဟာ ဒီပွဲမှာလည်း သူ့ရဲ့ ပုံစံကောင်းကို ဆက်ပြခဲ့ပြီး ဟက်ထရစ် သွင်းယူခဲ့တယ်။ Goal Machine အဂွဲရိုးအတွက် ဒါဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် (၉)ကြိမ်မြောက် ဟက်ထရစ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ပရီးမီးယားလိဂ်ဂန္ထ၀င်တိုက်စစ်မှူး အလန်ရှီးယား Alan Shearer ရဲ့ စံချိန်ဖြစ်တဲ့ (၁၁)ကြိမ်ကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ဖို့ နီးစပ်နေပါပြီ။
ဂုဏ်ယူစရာ မှတ်တမ်းတစ်ခု ရယူခဲ့တဲ့ ဒေးဗစ်ဆေးလ်ဗား
မန်စီးတီးကွင်းလယ်လူ ဒေးဗစ်ဆေးလ်ဗားဟာ ဟတ်ဒါဖီးလ်နဲ့ပွဲမှာ ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲ(၂၅၀)ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီး ဂုဏ်ယူစရာမှတ်တမ်းတစ်ခု ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ စပိန်ကစားသမားတွေထဲမှာ စတုတ္ထမြောက် ပွဲအများဆုံးကစားသမားအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ခဲ့တာပါ။ သူ့ထက် ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲပိုများတဲ့သူတွေက အာတီတာ Arteta (၂၈၄ပွဲ)၊ ရေနာ Reina (၂၈၅ပွဲ)၊ ဖာဘရီဂတ်စ် Fabregas (၃၄၄ပွဲ)တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Photo:Evening Standard,Stadium Astro,Manchester City,Fox Sports
မနျစီးတီး-ဟတျဒါဖီးလျပှဲမှာ ပရိသတျတှေ သတိမထားမိခဲ့တဲ့ ထူးခွားခကျြမြား
ဂှါဒီယိုလာ Guardiola ရဲ့ မနျစီးတီးအသငျးကတော့ လကျရှိခနျြပီယံခွစှေမျး ဆကျထိနျးခဲ့ပွီး ဟတျဒါဖီးလျကို (၆-၁)ဂိုးနဲ့ အပွတျအသတျ ခမြှေုနျးပဈခဲ့တယျ။ အဂှဲရိုး Aguero ရဲ့ ဟကျထရဈနဲ့အတူ ဒေးဗဈဆေးလျဗား David Silva ၊ ဂြေးဆူ Jesus တို့ကလညျး တဈတပျတအား ပါဝငျခဲ့ပွီး နောကျတဈဂိုးကတော့ ဟတျဒါဖီးလျက ကှနျဂိုလို Kongolo ကိုယျ့ဂိုးကိုယျ သှငျးယူခဲ့တာပါ။ အဲဒီပှဲနဲ့ပတျသကျပွီး ပရိသတျတှေ မသိလိုကျတဲ့ ထူးခွားခကျြတှကေို နာမညျကွီးဗွိတိနျသတငျးစာ Daily Mail က အခုလို ဖျောပွခဲ့တယျ . . .
မနျစီးတီး အသငျးသမိုငျးတဈလြှောကျ ပထမဆုံး Assists ပိုငျရှငျ ဂိုးသမား အီဒါဆနျ Ederson
မနျစီးတီးအသငျးရဲ့ ဘရာဇီးလျဂိုးသမား အီဒါဆနျ Ederson ကတော့ အသငျးသမိုငျးတဈလြှောကျ ဂိုးဖနျတီးမှု (Assists)ပွုလုပျခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးဂိုးသမားအဖွဈ မှတျတမျးဝငျခဲ့တယျ။ (၂၅)မိနဈမှာ အဂှဲရိုး သှငျးယူခဲ့တဲ့ အဖှငျ့ဂိုးက အီဒါဆငျ ကနျတငျပေးလိုကျတဲ့ ဘောလုံးကနတေဈဆငျ့ သှငျးယူခဲ့တာပါ။
ပှဲကွညျ့ပရိသတျဖွဈခဲ့တဲ့ ဒီဘရိုငျးနား De Bruyne
မနျစီးတီးအသငျးရဲ့ အောငျပှဲကို ပှဲကွညျ့ပရိသတျတဈဦးအဖွဈသာ ကွညျ့ခှငျ့ရခဲ့တဲ့သူ တဈဦးရှိပါတယျ။ အဲဒါကတော့ လကေ့ငျြ့ရေးကှငျးမှာ ဒူးဒဏျရာရခဲ့လို့ (၃)လအထိ အနားယူရမယျ့ ကှငျးလယျလူ ဒီဘရိုငျးနား De Bruyne ပါပဲ။ ဒီဘရိုငျးနားနဲ့အတူ ပှဲကွညျ့ပရိသတျဖွဈခဲ့တာကတော့ နောကျထပျကှငျးလယျလူ ဖဘေီယနျဒဲ့လျဖျ Fabian Delph ဖွဈပွီး သူလညျး ဒဏျရာကွောငျ့ ဟတျဒါဖီးလျနဲ့ပှဲမှာ ပါဝငျခဲ့ခွငျးမရှိပါဘူး။
Hat-trick hero အဂှဲရိုး
မနျစီးတီးအသငျး သမိုငျးတဈလြှောကျ သှငျးဂိုးအမြားဆုံး တိုကျစဈမှူး အဂှဲရိုးဟာ ဒီပှဲမှာလညျး သူ့ရဲ့ ပုံစံကောငျးကို ဆကျပွခဲ့ပွီး ဟကျထရဈ သှငျးယူခဲ့တယျ။ Goal Machine အဂှဲရိုးအတှကျ ဒါဟာ ပရီးမီးယားလိဂျ (၉)ကွိမျမွောကျ ဟကျထရဈဖွဈခဲ့ပွီး ပရီးမီးယားလိဂျဂန်ထဝငျတိုကျစဈမှူး အလနျရှီးယား Alan Shearer ရဲ့ စံခြိနျဖွဈတဲ့ (၁၁)ကွိမျကို ကြျောဖွတျနိုငျဖို့ နီးစပျနပေါပွီ။
ဂုဏျယူစရာ မှတျတမျးတဈခု ရယူခဲ့တဲ့ ဒေးဗဈဆေးလျဗား
မနျစီးတီးကှငျးလယျလူ ဒေးဗဈဆေးလျဗားဟာ ဟတျဒါဖီးလျနဲ့ပှဲမှာ ပရီးမီးယားလိဂျပှဲ(၂၅၀)ပွညျ့မွောကျခဲ့ပွီး ဂုဏျယူစရာမှတျတမျးတဈခု ပိုငျဆိုငျခဲ့ပါတယျ။ အဲဒါကတော့ စပိနျကစားသမားတှထေဲမှာ စတုတ်ထမွောကျ ပှဲအမြားဆုံးကစားသမားအဖွဈ ရပျတညျနိုငျခဲ့တာပါ။ သူ့ထကျ ပရီးမီးယားလိဂျပှဲပိုမြားတဲ့သူတှကေ အာတီတာ Arteta (၂၈၄ပှဲ)၊ ရနော Reina (၂၈၅ပှဲ)၊ ဖာဘရီဂတျဈ Fabregas (၃၄၄ပှဲ)တို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။